China Polyurethane Elastomer TDI System Casting Machine for CPU Scrapers Polyurethane Casting Machine ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူ |Yongjia
နံရံမျက်နှာကျက်အလှဆင်ခြင်း PU Cornice ပြုလုပ်ခြင်းစက် Pr...
PU Foam ဆေးထိုးစက် Polyurethane Soft Foam Flo...
မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ Polyurethane PU Cornice ပုံသွင်းစက်
ပလပ်စတစ်ဖြင့် Float Trowel 14×28 Polyurethane Foam...
Polyurethane ရေခဲသေတ္တာ Cabinet နှင့် Door Making Molds
CE လက်မှတ်ရ PU Sandwich Panel ပြုလုပ်သည့်စက် Lin...
CPU Scrapers Polyurethane Casting Machine အတွက် Polyurethane Elastomer TDI စနစ် Casting Machine
0.5~99.99S ​​(0.01S သို့ မှန်ကန်သည်)
ထပ်ခါတလဲလဲ ထိုးသွင်းမှု တိကျမှု-
A နှင့် B အကြားအချိုးအစား-
Polyol နှင့် Isocyanate
TDI စနစ် pu Casting စက်
Elastomer pu Casting စက်
PU Elastomer Casting Machine နိဒါန်း-
polyurethane elastomer Casting စက်ကို TDI၊ MDI နှင့် အခြားသော prepolymer amine cross-linking သို့မဟုတ် alcohol cross-linking systems ကဲ့သို့သော CPU ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။သမားရိုးကျ လက်ဖြင့်ပုံသွင်းခြင်း နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက polyurethane elastomer casting စက်တွင် အောက်ပါ အားသာချက်များ ရှိသည်- 1. အချိုးသည် တိကျပြီး တိုင်းတာမှု တည်ငြိမ်သည်။စက်ပစ္စည်းကို ချိန်ညှိရန်နှင့် ပြသရန် မြင့်မားသောတိကျသောအပူချိန်နှင့် ဖိအားခံနိုင်ရည်ရှိသော မီတာတိုင်းတာရေးပန့်နှင့် တိကျစွာဂီယာကို အသုံးပြုပါသည်။တိုင်းတာမှုတိကျမှုသည် 1% အတွင်းဖြစ်သည်။2. ပူဖောင်းမပါဘဲ အညီအမျှ ရောမွှေပါ။မြန်နှုန်းမြင့် ရောစပ်ခေါင်း၏ အထူးဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြုထားသည်။အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု၏ viscosity နှင့် ratio သည် အလွန်ကွာခြားသောအခါ၊ ရောစပ်ခြင်းကို အညီအမျှသေချာစေသည်၊ သို့မှသာ ထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်များသည် ပူဖောင်းများကင်းစင်သွားမည်ဖြစ်သည်။3. အပူချိန်သည် တည်ငြိမ်သည်၊ တိကျပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
No ကုသိုလ်ကံ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်
1 ရေမြှုပ်လျှောက်လွှာ အလယ်အလတ် အပူချိန် အီလက်စတိုမာ
2 ကုန်ကြမ်း viscosity (22 ℃) POLYOL～3000CPS ISO～1000MPas
3 ဆေးထိုးအထွက် ၃-၈ ကီလိုဂရမ်/စက္ကန့်
4 ရောစပ်ထားသော ရိက္ခာအပိုင်းအခြား ၁၀၀:၆-၁၈
5 ရောစပ်ခေါင်း 2800-5000rpm၊ အတင်းအကြပ် လှုပ်ရှားပေါင်းစပ်ခြင်း။
6 တင့်ကားပမာဏ 80L;250L
7 တိုင်းတာရေးပန့် ပန့်တစ်ခု-GAP-40 အမျိုးအစား B ပန့်-GAP-40 အမျိုးအစား
8 Compressed Air လိုတယ်။ အခြောက်၊ ဆီမပါ၊ P:0.6-0.8MPa Q:600NL/မိနစ်(ဖောက်သည်ပိုင်)
9 အပူချိန်ထိန်းစနစ် အပူ: 2×3.2Kw
10 ထည့်သွင်းပါဝါ သုံးဆင့်ငါးကြိုး 380V 50HZ
11 အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ 10KW ခန့်
ထုတ်ကုန်၏အင်္ဂါရပ်များဖိအားပုံသွန်းစက်:မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်နိမ့်သောမြန်နှုန်းမြင့်တိကျစွာတိုင်းတာခြင်းပန့်၊ တိကျသောတိုင်းတာမှု၊ ကျပန်းအမှား ±0.5% အတွင်း။ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းမော်တာ၊ မြင့်မားသောဖိအားနှင့် တိကျမှု၊ ရိုးရှင်းပြီး လျင်မြန်သောအချိုးထိန်းချုပ်မှုဖြင့် ကြိမ်နှုန်းပြောင်းသည့်ကိရိယာဖြင့် ချိန်ညှိထားသော ပစ္စည်းအထွက်ကို။စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ရောစပ်ကိရိယာ၊ ချိန်ညှိနိုင်သော ဖိအား၊ တိကျသော ပစ္စည်းအထွက်ကို ထပ်တူပြုခြင်းနှင့် ရောစပ်ခြင်း; အမျိုးအစားသစ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် reflux ပြဿနာကို ရှောင်ရှားသည်။အထူးရောစပ်ခေါင်းပါရှိသော ထိရောက်မှုမြင့်မားသော ဖုန်စုပ်စက်သည် ထုတ်ကုန်တွင် ပူဖောင်းများမရှိကြောင်း သေချာစေသည်။ဆီကို အပူလွှဲပြောင်းရန်၊ ထိရောက်ပြီး စွမ်းအင်ချွေတာရန်အတွက် လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူပေးခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်း; Multi-point temp.control စနစ်သည် တည်ငြိမ်သောအပူချိန်၊ ကျပန်းအမှား <± 2°C ကိုသေချာစေသည်။လောင်းခြင်း၊ အလိုအလျောက် သန့်စင်ခြင်းနှင့် လေသန့်စင်ခြင်းတို့ကို ထိန်းချုပ်ရန် PLC နှင့် ထိတွေ့မျက်နှာပြင် လူ-စက်မျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြုခြင်း။
စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မား၍ ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေများကို အလိုအလျောက် ခွဲခြားနိုင်ခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် အချက်ပေးနှိုးဆော်ခြင်းများအပြင် ပုံမှန်မဟုတ်သောအချက်များကို ပြသပေးနိုင်ပါသည်။elastomer ပုံသွန်းစက်အသုံးပြုမှု၎င်း၏ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်၊ polyurethane elastomer ပုံသွန်းစက်ကို အလုပ်ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်များစွာတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် Elastomer ပုံသွန်းစက်ကို polyurethane ခြစ်စက်ထုတ်လုပ်ရန်လည်းအသုံးပြုသည်။ PU Scraper ၏ အားသာချက်များPolyurethane scraper သည် မြင့်မားသော ပွန်းပဲ့မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိကာ၊ ဖျော်ရည်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တာရှည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။မတူညီသောအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်အရ၊ ထုတ်ကုန်၏မာကျောမှုကို ကျယ်ပြန့်စွာရွေးချယ်ထားသည်- ShoreA40-ShoreA95၊ မတူညီသောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများအတွက် မတူညီသောမာကျောမှုနှင့် မတူညီသောပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ပါ။Polyurethane squeegee ကို PU squeegee လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ကျောက်မီးသွေး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဓာတ်မြေသြဇာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သဲသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဲ့သို့သော တွယ်ကပ်နေသော ပြာမှုန့်များနှင့် အမှုန့်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ကျောက်မီးသွေးနှင့် ဓာတုပစ္စည်း သယ်ဆောင်သည့် ခါးပတ်များတွင် အသုံးပြုသည်။
ယခင်- 10L/Min Standing Polyurethane Anti Fatigue Mats Polyurethane Foam စက်
နောက်တစ်ခု: On-Site Production Protective Polyurethane Foam-In-Place Packaging Solution Machine စနစ်
6000RPM Polyurethane Elastomer Casting စက်
Polyurethane မျက်နှာပြင် 0.1Mpa PU Elastomer Casting...
Pould Punch ပြုလုပ်ခြင်း PU Elastomer Casting စက်
PU Conveyor Belt Scraper 18kW Polyurethane Cast...
အလိုအလျောက်ကျည်ဆန် 0.01Mpa Polyurethane Casting M...